Uzenza njani iividiyo eziBandakanyileyo kubaBhalisi bakho be-LGBTQIA bakaYouTube-YTpals
UYouTube lelona qonga lisetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela, elenza libe namandla kakhulu ekudluliseleni imiyalezo ebalulekileyo. Iividiyo ezikuYouTube zinamandla okubumba inkcubeko kwaye ziphembelele uluvo loluntu kwimiba ethile. Naluphi na uhlobo losasazo lunokuthi lubethelele iinkolelo ezisoloko zinengxaki eluntwini okanye luncede ekulweni nazo. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukwenza umxholo wevidiyo oqukayo kwaye wamkelekile kwi-LGBTQIA yakho Ababhalisile be-YouTube.
Ukuyila i-LGBTQIA-Isithuba esiLumkelekileyo kuYouTube
Ngelixa kukho ukuphuculwa kokubonakaliswa kweyantlukwano kwimidiya yesikrini, kusekude ukuba ibe yindawo ebandakanyayo. Phantse i-20 pesenti yabantu base-United States bachonga njenge-LGBTQIA, ngelixa iipesenti ezisi-9 kuphela ziqhelekileyo kumabonwakude we-Primetime.
I-YouTube, kwelinye icala, yayisekelwe kwimigaqo eyahlukeneyo. Yayingafani neendaba zemveli. Eyona njongo iphambili yeYouTube kukunika wonke umntu ilizwi. Oku kukunika amandla okujongana nezithuba zokumelwa kwindawo ye-intanethi. Ungasebenzisa ilizwi lakho ukufowunela indawo elunge ngakumbi kuYouTube.
Uzenza njani iividiyo ezikhuthaza ukubandakanywa okukhulu?
Xa usenza iividiyo zeYouTube, iya kuba yinto entle ukukhumbula ukuba bonke abantu banecala lokungazi. Lo mkhethe unamandla okuphembelela abantu. Sithatha isigqibo malunga neembono esifuna ukuzifaka kwiividiyo. Kukho iindlela onokuthi ukhuthaze ukubandakanywa kwaye wenze iividiyo ezithandekayo kwijelo lakho likaYouTube. Makhe siqwalasele ezinye zazo.
1. Ukwahluka kweqela leMveliso
Kudla ngokuthiwa umqhubi wezinto ezintsha ezahlukeneyo. Iqela elinemibono eyahluka-hlukeneyo linokuzisa iimbono zokuyila neziyila izinto ezintsha. Ukuba uneqela lokuvelisa iividiyo ezahlukeneyo, kunokukuthintela ukuba ungaweli emingxunyeni yokungazi nto. Umzekelo, ukuba wenza umxholo kuluntu lwe-LGBTQIA, iya kuba licebo elilungileyo ukufumana igalelo kumntu ovela kuluntu. Baza kukunceda ukuba uqonde ukuba yintoni enxibelelana kakuhle noluntu kwaye yintoni enokuvela njengokhubekisayo.
2. Izihloko kunye neembono
Cinga ngokutsha uhlobo lweevidiyo ozenzayo. Jonga isihloko kunye neembono ozibandakanyayo kwiividiyo zakho. Eyona nto ibalulekileyo kukungaze wenze nayiphi na ingqikelelo kwiividiyo zakho. Kwakhona, khumbula inqaku malunga nokufaneleka. Kuya kufuneka uzame ukungazichazi iziko okanye uhlanga lomntu ngelixa usenza ividiyo ngaphandle kokuba yongeza ixabiso elithile kumxholo wevidiyo.
3. Jonga indlela abantu ababona ngayo ijelo lakho
Xa usongeza nasiphi na isiqulatho kwiividiyo zakho, nokuba zii-voiceovers, oopopayi betalente, qwalasela ukuba kukho nakuphi na ukwahluka kumelo. Rhoqo ngelixa sisenza iividiyo, sihlala sithatha ukhetho olungagqibekanga oluqhelekileyo. Isigqibo sisoloko siqhutywa lula. Ngokujonga ukuba abanye bangalijonga njani ijelo lakho, uya kukwazi ukuya ngaphaya kwemithombo yesiqhelo ekudaleni iividiyo ezinobuhlobo ngakumbi.
4. Ukukhetha Amagama
Xa usenza umxholo wevidiyo, ukhetho lwamagama lunokubaluleka kakhulu. Kubalulekile ukuba sicinge ngohlobo lwemifanekiso esiyisebenzisayo ukuze singakhubekisi ababhalisi be-LGBTQIA beYouTube. Phinda ucinge ngokusetyenziswa kwakho kwezichazi kwaye usebenzise isigama esilula kakhulu. Umzekelo omhle kukusebenzisa 'bona' njengesimelabizo endaweni yesimelabizo sobufazi kunye nobudoda.
5. Vumela Umxholo Wakho Uzithethele
Xa usenza umxholo wevidiyo kuYouTube, akunyanzelekanga ukuba uxele ukuba isitishi sakho sibandakanya okanye sinobubele. Iividiyo zakho zinokubonisa ezi ngqikelelo ngezafobe zokuvuleka, uqhagamshelwano, kunye nokulinganisela. Ukubonisa uqhagamshelo, ungabonisa intsebenziswano phakathi kwabantu abahlukeneyo, ngelixa ukuvuleka kunokuboniswa ngokubandakanya ukuhlangana kweendlela ezahlukeneyo.
Ngezi zalathisi, uya kuba nakho ukwenza umxholo wevidiyo kuYouTube oyenza ibe yindawo ebandakanyayo kunye neyobuhlobo. Ukuba ujonge ku ukuthenga izimvo YouTube, ukuthanda, okanye izimvo, emva koko ytpals.com yindawo yakho. Sibonelela ngoluhlu lweprimiyamu yeYouTube ukwenza isitishi sakho siphumelele ngakumbi. Qhagamshelana nathi namhlanje ukuze wazi ngakumbi malunga neenkonzo.
Uzenza njani iividiyo eziBandakanyileyo kubaBhalisi bakho be-LGBTQIA bakaYouTube ngababhali beYTpals, 25 Novemba 2021
Nantsi into ekufuneka uyazi ngokuGuqulwa kweYouTube
Intengiso yemithombo yeendaba kwezentlalo, kubandakanya nentengiso yeYouTube, konke malunga nokulinganisa, ukufunda, kunye nokubeka olona nyawo lubalaseleyo phambili. Njengokuba abantu abaninzi betshintshela kwiividiyo ezikwi-intanethi (iipesenti ezingama-82 zazo zonke izithuthi kungenzeka…
Kutheni le nto amaYouTube amaxwebhu agqithisa kangaka kule mihla?
I-YouTube likhaya kwiintlobo ezahlukeneyo zevidiyo. Ngelixa iividiyo ezimfutshane nezimnandi ngokukhawuleza ziba yinto yesiqhelo, kukho enye into ekhula kakhulu. Sithetha ngamaxwebhu e-YouTube apha. Uxwebhu ngu…